Xog: Madaxda kooxda PSG Oo Qorsheynay In Chelsea Kala Soo wareegana N'Golo Kante Iyo Bleus Oo Wel Wel Uu Soo Foodsaray
Tuesday, December 18th, 2018 - 22:09:35
Wednesday October 11, 2017 - 09:50:35 in Wararka by Kubad Bile
Antero Henrique oo ka mid ah Madaxda sar sare ee Kooxda BSG ayaa Ayaa ka dhawaajiyay hadal Ay ka naxeen Kooxda Chalsea kadib markii uu Xidiga N'Golo Kante ugu magac daray liiska suuqa kala iibsiga Xidiga ugu horeeya ee Ay ka doonayaan.
Kooxda Faransiiska ayaa ka tageen dhawaan Blaise Matuidi oo ku biiray (Juventus) iyo Grzegorz Krychowiak oo isna (West Brom) xagaan ku wareegay, Henrique ayaana si firfircoon u soo bandhigtay liiska ciyaartoyda bedelka ah labada laacib.
Le Parisien ayaa sheegay in Kante uu ku jiro qorshihiisa, waxaana uu kalsooni ku qabaa in ciyaaryahanka khadka dhexe uu dib ugu soo laaban karo dalkiisa France sanadka soo aadan.
''Inaad ahaato Parisian Waa wax weyn xiligaan,Kante ma ahan mid ka xishoonaya ama qarinaayo jaceylka uu u qabo PSG iyo kooxda iminka "super super".
PSG ayaa haatan diyaar u ah inay si adag ugu dhaqaaqdo inay ku soo laabato Doonista Kante, taasoo ku qancisay inuu doonayo inuu qeyb ka noqdo mashruuc cusub oo xiiso leh iyo koox dhankasta ka diyaarsan.
W/D: Abdirashiid Qanciye.